Sitchmaps / Hantidhawr caalami ah, u beddel sawirada si ecw ama kmz - Gofumed
Juunyo, 2011 Cartografia, Google Earth / Maps
Dhowr maalmood ka hor ayaan ka hadlayey isbedelka sawirada laga soo qaaday Google Earth, adoo adeegsanaya kml tixraac marka aad kala bixineyso. Imtixaanka Khariidadda Caalamiga ah Waxaan fahamsanahay in tallaabadan la iska dhaafi karo haddii aan soo dejinno faylka qalabaynta marka la soo dejinayo sawirka, habka aan u bedeli karno qaab kale sida ECW taas oo aad u iftiimaya oo aan luminayn tayada ama xitaa kmz sida sawir.
1 Soo qaado faylka qalabixinta
Tani, waqtigan xaadirka ah sawirka, waa lagama maarmaan in la doorto si loo badbaadiyo feylka qaabka moodeelka Global.
Marka aad soo dejineyso sawirka, isla buugga ayaa keydin doona faylka, oo leh magac isku mid ah sawirka iyo kordhinta .gmw
2 Furan sawirka
Si aad u furto Mashiinka Global, waan sameynaa Faylka> Faylasha Macluumaadka Furan ...
Ma aanan dooran image image .jpg laakiin faylka .gmw, talaabo aan ku dooneyno inaan keeno sawirka horey loo soo mariyey.
Eye, haddii aan dooneyno in aan la shaqeyno isuduwayaasha juqraafiga, sawirka waa inuu bedelaa saadaashii maxaa yeelay markii uu ka soo degayo Google Earth waxay ku taal Latitude / Longitude iyo Datum WGS84.
WGS84 Datum ee isticmaala Google wuxuu la mid yahay ETRS89 oo loo isticmaalo Yurub ama Clarke 1866 oo aan isticmaalno Maraykanka.
Laakin waxaan u maleyneynaa in aan rabno inaan u wareegno Datum kala duwan, sida ku jirta xaalad ED50 ama NAD 27 oo ah mid la mid ah oo aad u fara badan America).
3 Beddel sheyga sawirka
Tan waxaa lagu qabtaa:
Gudaha saadaasha waxaynu kor u qaadaynaa guddi sida kan sawirka ku qoran:
Haddii aan rabno in aan ka gudubno nidaam la saadaaliyay ayaan ku sameynaa combobox saadaasha.
Xaaladdan oo kale waxaan daneyneynaa inaan u dhaqaaqno UTM. Kadib waxaan doorannay aagga, Datum iyo unugyo.
Waxaad sidoo kale si toos ah u yeelaan karaan code EPSG ah, shuban file a .prj in ay ahayd wax caadi ah oo la ArcView 3x ama .aux in mar hore waxay keentaa dhismeedka XML ah ee qoraalkii cusub ee ESRI. Xitaa haddii aad haysato fayl kale oo lagu dhejiyey nambarada xml barnaamijka kale, waxaa lagu dhejin karaa iyadoo la isticmaalayo extensionka .txt
Ka dibna riix badhanka Appy. Meelaha heerka hoose waa inaanu aragnaa isbedelka.
3 Ku dhoofi si aad u hesho
In Mashiinka Global ma joojiyo cajiib ah, sababtoo ah si ay u gudbiyaan muuqaalka qaabka .ecwaa waa wax barnaamijyo badan oo aan samayn. Sababtoo ah waxaa iska leh Erdas, waa inaad haysataa oggolaansho, marka laga hadlayo Microstation Qeybaha V8i.
Faylka> Raster Export / qaabka muuqaalka ...
Ogeysii inaad u bedeli karto qaabab binaryar ah, iyo sidoo kale Idrisi, TIFF ama Erdas img.
Sawir muuqaal ah ayaa aad ugu faa'iideysan kara isticmaalka barnaamijka CAD / GIS, laakiin haddii aan dooneyno in aan ugu yeerno Google Earth wax suurtagal ah ma ahan in la geeyo xitaa haddii aan u dhoofino Kumbiyuutarka Caalamiga ah ee kmz kaas oo ku jira sawirka.
4 Soo dhoofi sawir si kmz
Guud ahaan waxaan ku fahannay faylka fiidmeerka ee kml kaas oo ku jira khadadka qaar, dhibcaha ama geesoole, miisaankeedu yar yahay kb.
Haddii loo dhoofiyo kmz, barnaamijka wuxuu bilaabmaa inuu sameeyo tiro badan oo soo jiidasho ah oo muuqaalkuna ka bilaabmaa qaybaha oo uu ku muujiyo kml, sida marka furitaanka kmz ee Google Earth waxa keena waa sawirka.
Si aad u aragto waxa ku jira kmz, kordhinta waxaa loo badalayaa qaab .rar / .zip qaabka la isku daro kadibna la galiyo fayl. Halkaas waxaad ka arki kartaa in uu jiro fayl la yiraahdo doc.kml kaas oo ku jira qaybaha noocyada dhismaha gobolka iyo sawirka la yiraahdo sida dhulka hoostiisa.
Aad u fiican Khariidadda Caalamiga ah, Waxaan sharxayaa in ficilkan kama dambaysta ah uusan samayn wax barnaamij ah.
Post Previous«Previous BiblioCAD, download AutoCAD blocks iyo qorshayaasha
Post Next Sidee loo sameeyaa muujin toos ah oo leh Microsoft WordNext »
4 Jawaab in "Sitchmaps / Mapper Global, rogaa images si ecw ama kmz"
Waa lagama maarmaan in la arko haddii 'kmz' uu lahaa xog ku xirneyd kaliya server oo uusan ku dhex jirin faylka. Hadday sidaas tahay, sanduuqa kujira kaliya ayaa laqaban doonaa.
Henry isagu wuxuu leeyahay:
markaan u gudbiyo google earth pro file-ka ah kmz ilaa mapper adduunka oo keliya khadadka polygon ayaa muuqda oo aan ahayn aagga khariidadda, oo maardiyaha wuxuu soo saarayaa digniin halka uu ku leeyahay wax xiriir ah lama laha serverka
Diana paulina tejero jimenes isagu wuxuu leeyahay:
super cincreivle bye omo tellamas dimelo fadlan jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.teamo iyo anna ku garan maayo
Soel Lopez isagu wuxuu leeyahay:
sida aan sameeyo si aan ugu gudbiyo Google illaa No1, si aan ugu isticmaalo GPS-ka diyaaradda